Ogaden News Agency (ONA) – Ganacsatada Soomaaliyeed ee K. Africa oo Halis Lasoo Daristay.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee K. Africa oo Halis Lasoo Daristay.
Posted by ONA Admin	/ August 31, 2018
Boob iyo dilka socda xaafadaha isku raranka ah ee lagu magacaabo Saweto ee ka tirsan magaalada Johannesburg, xaalad adag iyo cabsi ah ayaa halkaasi ka jirta waxaana laga cabsi qabaa in rabshadaha ay sii bataan oo ay kusii fidaan xaafado kale.
Goobaha ganacsi oo ku yaalla xaafadaha ku dhex yaal isku raarantaas ayaa waxa leh dad shisheeye ah oo ka tagay dalalka Afrika waxaana ka mid ah dad u dhashay dalalka Soomaalia, Itoobiya, Zimbabwe iyo Pakistan. Kuwo badan oo ganacsatadaas ka mid ah ayaa durba xirxirtay waxyaalihii ay ku gadayeen dukaamadooda dabadeedna waxay goaansadeen inay ka baxaan xaafadda isku raranta ah iyagoo ka cabsi qaba in rabshaduhu ka sii daraan.
Saraakiisha Booliska Koonfur Afrika ayaa xaqiijiyey in laba qof lagu dilay isku dhacyo dhex maray dadka wadanka iyo ajaanibka ku nool isku raranta Soweto,waxaana ay sheegeen in ay jiraan dadaallo lagu xakamaynayo qalalaasahaasi ka taagan dalkaasi Koonfur Afrika.
Dalka Koonfur Afrika ayaa inta badan waxaa ka dhaca falal amni daro iyo qalalaasiyo ka dhan ah dadka Ajaanibta ah ee ku nool dalkaasi,kuwaasi oo loo geysto Dil iyo boob ganacsigooda ah.